ရဲ့ရထားစက်မှုလုပ်ငန်းလုံခြုံသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့ကြစို့. မီးရထားဘူတာ၏အများစုရထားနှင့်ဘူတာ၎င်း၏သန့်ရှင်းရေး protocol ကိုပြင်းထန်နေဆဲ. သန့်ရှင်းရေးပြင်းထန်လာအပြင်, ရထားပေါ်တွင်နှင့်ဘူတာမှာအကြိမ်ရေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့သည်. သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုအလုပ်ချိန်နာရီအခြေခံပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်, နှင့် handrails ချရှင်းလင်းပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်, များရှိတံခါးလက်ကိုင်, လက်ကိုင်နှင့်အိမ်သာ. အပိုဆောင်း antibacterial ထုတ်ကုန်, သန့်ရှင်းရေးနှင့် Wipe အပါအဝင်, ဘူတာမှာပေးလျက်ရှိသည်, ရထားပေါ်တွင်နှင့်ဝန်ထမ်းအလုပ်ဒေသများရှိ.
ကျနော်တို့သွားအကြံပြု 100% ချိတ်ဆက်မှုသင်သည်တတ်နိုင်လျှင်. သင်သည်သင်၏ဝယ်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ် ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ရှေ့ဆက်မယ့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အားလုံးငွေပေးချေမှုချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သင့်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းစွာ, အချို့ရောနှောမက်ဆေ့ခ်ျရှိပါတယ်. ဤသည်အင်္ဂလန်၏ဘဏ်အမိန့်: "အခြားမည်သည့်မျက်နှာပြင်လိုပဲလူများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ရောက်ကြောင်း, မှတ်စုဘက်တီးရီးယားဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, တစ်ဦးပေါ်လီမာမှတ်ချက်ကိုင်တွယ်ကအန္တရာယ်အန္တရာယ်မဆိုအခြားဘုံထိထက်မ သာ. ကြီးမြတ်ထိုကဲ့သို့သော handrails အဖြစ်ပေးတယျဖြစ်ပါတယ်, များရှိတံခါးလက်ကိုင်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကတ်များ။ " ယခုလအစောပိုင်းက သတင်းစာအစီရင်ခံစာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပြောဆိုထားသည် (WHO က) ငွေစက္ကူတွေဖြစ်နိုင်သည်ဟု အဆိုပါ coronavirus ပျံ့နှံ့, လူတွေအစားချိတ်ဆက်မှုငွေပေးချေသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားသင့်ဒါ. သို့သော်ထိုသို့ထို့နောက်သော WHO ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည် ငြင်းပယ်ပါကငွေသားဟာ coronavirus ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ခဲ့, ထိုသို့ "အတု" ခဲ့ - ဒါသွားလာရင်းပုံ.
အလုပ်အများဆုံးရထားတစ်စီး မြို့ကြီးများသည်လန်ဒန်ဖြစ်သည်. လန်ဒန်များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးမြို့တော်ရဲ့အပေါ်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအဆင့်ဆင့်တိုးတက်စေရန်တစ်ဦး "တိုးမြှင့်သန့်ရှင်းရေးစစ်အစိုးရကို" ထုတ်ဖော်ပြသ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဒါပေမဲ့ဘာမျှမလူမှုရေးအကွာအဝေးပြဋ္ဌာန်းရန်မှ. ဒါဟာသင်မှတက်ဖြစ်ပါတယ်. အောက်ခြေလိုင်းသင်သည်အခြားလူကိုထိရှောင်ပါကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း. ဒီထက်အလုပ်များအချိန်များတွင်ခရီးသွားဖြစ်နိုင်လျှင်, သငျသညျထိထိမိမိသံလမ်းကိုရှောင်ရှားမရနိုငျပါလျှင်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်, စသည်တို့ကိုစီးနင်း. သင်တို့နှင့်အတူအသင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုးသတ်ဆေးသယ်ဆောင်. ခပ်သိမ်းသောကာလသင်တို့အဘို့အပေးဖို့ရထားဘူတာရုံများအပေါ်မှီခိုမနေပါနဲ့. စိတ်မကောင်းခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကင်း!
အတော်များများကကြီးမားသောကော်ဖီချည်နှောင်သည့် coronavirus ဖြစ်ပွားတုံ့ပြန်ပြန်လည်စဉ်းစားပါရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ - Starbucks ကယာယီပြန်သုံးနိုင်သောခွက်များအသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ဝါးပစ္စည်း - ဖောက်သည်များနှင့်ဝန်ထမ်းများနှစ်ဦးစလုံး၏လုံခြုံရေးအတွက်. အများအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခွက်ကိုယူလာဘို့အလျှော့စျေးလက်ခံရရှိ, ဒါပေမဲ့အခုသင်တူညီတဲ့တုန့်ပြန်မရစေခြင်းငှါ! သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏မျက်နှာကို ထောက်. ကြောင်းသေးငယ်တဲ့လျှော့စျေးလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးဖို့ရှိသည်တာပေါ့.
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကျွန်တော်ထင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အန္တရာယ်များအတွက်ရှိနေဆဲဟုဗိုင်းရပ်စ်ကြောင်းထောက်ပြဖို့ပိုဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည် 48-72 တစ်ခက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနာရီ, ထိုကဲ့သို့သောလက်တော်ရထားလမ်းအဖြစ်. ဒါကကိုယ့်သော်လည်းရထားလျှောက်ထားပါဘူး. ဒါဟာမဆိုအများပြည်သူအာကာသင်.
သငျသညျသံလမ်းကိုထိမှရှိပါက, ခလုတ်, လက်မှတ်တွေနဲ့ပေါ်ဒါ, ကိုယ့်တဦးတည်းလက်သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်အတူလုပ်ရန်ကြိုးစား, သင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်! အခြား "စင်ကြယ်သော" လက်၌ဖုန်းများသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သင့်လိုရာခရီးမှာမကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့နှစ်ဦးစလုံးကိုလျှော်.
သငျသညျရထားခရီးသွားလာနေမယ်ဆိုရင်သင့်ကိုယ်ပိုင်မုန်ထုပ်ပိုး. Many trains have ယာယီသူတို့ရဲ့ First Class Lounge ပိတ်ဘုတ်တွေကိုကူညီနေတဲ့အပေါ်ဖယ်ရှားခံရ. ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့ lunchboxes နှင့်အတူဖန်တီးမှုရရန်အချိန်! သငျသညျဘုတ်အဖွဲ့မတိုင်မီဘူတာရုံအစားအသောက်လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စေားသို့မဟုတ်ဝယ်ယူယူပါ. ဤဆောင်ရွက်ချက်များသင်တန်းများမှာ, သငျသညျကိုကာကွယ်ရန်နှင့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပြန့်ပွားမှုကိုလျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်း!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “Covid-19: Travel တွင်မည်သို့ရထားခရီးသွားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/covid19-train-travel-industry-advise/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Coronavirustravel covid19 လုံခွုံမှု ရထားခရီးသွား